क्यापटेन लामा भन्नुहुन्छ : कुलमानको विकल्प अरु छैन, नत्र फेरि पनि लोडसेडिङ गर्छन । कुलमान लाई फेरि ल्याउनु पर्छ। कृपया सक्दो सेयर गर्नुहोला – Sapana Sanjal
क्यापटेन लामा भन्नुहुन्छ : कुलमानको विकल्प अरु छैन, नत्र फेरि पनि लोडसेडिङ गर्छन । कुलमान लाई फेरि ल्याउनु पर्छ। कृपया सक्दो सेयर गर्नुहोला
May 27, 2021 217
Sapana Sanjal : काठमाण्डौं : नेपाल वायु सेवा निग’मका वरिष्ठ “पाइलट विजय लामाले देशमा लो’डसेडिङ सुरु हुन थालेको भन्दै “आ,क्रोश पोखेका छन्।
र नेपाल विद्युत् प्राधि’करण मा का’र्यकारी निर्दे’शक कु लमान घिसिङ भएका बेला लो’ड सेडिङ नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले किन हुन थाले को हो भनेर प्रश्न गरेका हुन्। यो देशमा कुलमान नभएको भए आज पनि लो डस्रेडिङ खे प्नु पर्थ्यो”।
शनिबार बि’हान सामा’जिक स’ञ्जालमा ला’माले ले’खेका छन्, फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! अनि कारण देखाउदा सु ख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छ्न अहिलेको बिद्धुत प्रा’धिकरणको हा’किम सा बले!
के” कुलमान घि’सिङको पालामा चाहिँ सु’ख्खा याम लागेन अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो? “प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाइ केही समय पछि फेरि इन्व”र्टर अनि जेनेरेटर मा,फियाहरु
सल्बलाएर आउदैनन अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउदैन भन्न सकिन्न! यहि चाला’ले पुर्याउनु समय लाग्दैन।जनता भनेको के हो बुझ्नै गाह्रो भै सक्यो कारण जे पनि चु प लागेर सहने??
‘हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ जुन देशमा शिर्श नेता हरुलाई झ,गडा गर्नमा नै फुर्सद छैन!! झै झगडा गर्न रोकेर देश बिकाशका काम कुरा पो गर्ने कि?? जय चन्द्र सुर्य!!!जे भए पनि” कुलमानले ह’टाएको यो कालो अध्यारो अब सधैको लागि समाप्त हुनुपर्छ अध्यारो हुनुहुन्न नत्र भने फेरि जनताले कुलमान नै खोज्छन”।
यो पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री गौरी मल्लले धरहरा त उठ्यो हामी नेपाली कहिले उठ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेकी छिन् । उनले सामाजिक संजाल मार्फत हामी नेपाली कहिले उठ्ने भन्दै ओलीलाई प्रश्न गरेकी हुन् ।
आज शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको समउद्घाटन गरेका छन् । वि.स. २०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पले ढलाएको पुनर्निर्मित धरहराको समउद्घान गरेका हुन् । त्यही प्रसंगलाई लिएर अभिनेत्री गौरी मल्लले धरहरा पटकपटक ढलेर पनि यसपालि बलियो जग पाएको बताएकी छिन् ।
उनले धरहरा एक पटक पुनः शानले आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सक्षम भएको बताएकी छन् । उनले धरहरा उठे पनि आफ्नो ओठमा गर्वको मुस्कान नरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत बताएकी छन् । उनले देशको बर्तमान स्थिती नेपालीको जनजीवनलाई लिएर थुप्रै प्रश्न उठाएकी छन् ।
उनले धरहरा जस्तै नेपाल कहिले उठ्न पाउँला ? मेरा देशवासीको पनि धरहराको जस्तै त्यो बलियो जग भएको जीवनस्तर कहिले बन्ने हरेक कोण कोण बाट गिराइसकिए को मेरो देशले शानले फेरी कहिले शिर उठाउन पाउने ? भनि प्रश्न उठाएकी छिन् ।
जस्ताको तस्तै धरहरा पटक पटक ढल्यो र पटक पटक उठ्यो पनि। लाग्छ यो पाली धरहराले बलियो बनोट पाएको छ । शानले पुनः एक पटक आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सक्षम बन्यो। धरहरा त उठ्यो र पनि मेरो ओंठमा गर्वको मुस्कान छैन।
“अब धरहराले जस्तै मेरो दे शले कहिले उठ्न पाउने ? मेरा देशवासीको पनि धरहराको जस्तै त्यो बलियो जग भएको जीवनस्तर कहिले बन्ने ?हरेक कोण कोण बाट गिराइसकि एको मेरो देशले शानले फेरी कहिले शि”र उठाउन पाउने.? धरहराले जस्तै! हो , धरहरा त उठ्यो तर हामी कहिले उठ्ने होला?
Prevनेपाली सेनाका जर्नेल दिनेश केसीको निधन
Nextमेरी आमा बाँचेको भए आज रानी बनाएर राख्ने थिए, आमाले मृत्युको मुखमा पुग्दा अन्तिममा यस्तो भन्नुभएको रहेछ जुन सम्झेर धरधरी रोइन नायिका निता ढुंगाना – (भिडियो)
पशुपति क्षेत्रबाट घाट नराखी अन्यत्र सार्ने
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (625)
हड्डि र छाला मात्रै बाकि छ ,यी १४ बर्षिय बाबुलाई यो के भयो यस्तो ,कठै (हेर्नुस् भिडियो ) (602)